Ọ dị mma ịsa uwe apịtị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Etu esi asa akwa apịtị - azịza na ajụjụ
Etu esi asa akwa apịtị - azịza na ajụjụ
Ọ dị mma ịsa uwe apịtị?
Na-asachan'ime mmiri ọkụ.
''Saa apịtịma ọ bụ ihe ruru unyiuwen'ime mmiri kacha ekpo ọkụ nke uwe ahụ mara mma na-enye ohere, 'ka Ahoni na-ekwu. Nke a na-enye ohere maka ihicha miri emi karị ka ị na-echekwa akwa akwa ahụ ka ọ ghara ịdị ọkụ.13bọchị 13 2018
Taa ọ nwere ike iyi ka ọ nweghị ihe dị mfe karịa ịsa akwa: ị na-atụba uwe gị akwa na igwe ịsa ahụ na ọ dị ọcha n'oge na-adịghị anya, nri? Ọfọn, ezie na enweghị m ike ikwenye na usoro ahụ, enwere ụfọdụ ndụmọdụ nwere ike ịme ụbọchị ịsa akwa gị ọtụtụ ihe ọ funụ! Dịka ọmụmaatụ, m na-etinye nhichapụ mmiri mgbe niile n'ime igwe ịsa ahụ tupu etinye akwa m n'ime ha. Na n'ihi ihe. Ọ bụrụ na ị nwere anụ ụlọ ma ọ bụ hụ uwe ojii, nsogbu a na-akpasu gị iwe maara gị nke ọma.
Na-adọpụ uwe gị dị ọcha nke si na igwe ịsa ahụ na gịnị ka ị hụrụ? Nri, ha kpuchitere na efu na anu ulo anumanu n’ebe nile! Aargh! Ọ bụ ya mere m ji asa ihe m na mmiri! Kwesighi ikpo obodo ahụ maka ịchọta nhichapụ mmiri - ndị nkịtị a na-ere na nnukwu ụlọ ahịa ọ bụla ezuola! Were ọtụtụ nhichapụ, tinye ha na igwe ịsa ahụ na ibu Mee akwa gị. N'oge usoro ahụ, akwa nhicha ahụ ga-agagharị na drum nke igwe ịsa ahụ, na-achịkọta lint na ntutu. Mana n'agbanyeghị ịdị mfe nke usoro a, enwere isi ihe ị ga - ebu n'uche: - Anaghị eji akwa nhicha ahụ ugboro abụọ; - ahọrọla mmiri mmiri na-esi isi; Ma ọ bụghị ya, uwe gị nwere ike ịmị isi; - Wet wipes kwesịrị ịdị oke zuru ka ọ ghara ịdọbi n'ime igwe; - Ọ kachasị mma iji hichapụ antibacterial mgbochi mmiri; - Ọ bụrụ na ịchọtaghị ihichapụ mmiri na-enweghị isi, tinye ụfọdụ softener - ọ na-eme ka isi ahụ dị nro; - Ejila ihe karịrị 3 nhichapụ mmiri n'otu oge.
Nke a bụ ihe mara ezigbo mma nke nwere ike ịme nsacha akwa gị na-enye afọ ojuju karịa. Mana nke ahụ abụghị naanị ndụmọdụ m nwere maka gị taa! - Na-etinye taabụ efere efere abụọ n’ime ịgbà nke igwe ịsa ahụ gị wee jiri igwe na-agba ihe na-ekpo ọkụ. Nke a bụ otu ị ga - esi tufuo ụmụ nje, unyi na ọbụlagodi limescale! - Coca-Cola nwere ike inyere gị aka iwepụ nsị ọbara.
Nwere ike ịmịkọrọ uwe metụrụ afụ na soda n'abali maka nsonaazụ kacha mma. Iji usoro a maka uwe ọcha, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe kachasị mma. Tinye obere bọọlụ tenis n'ime igwe ịsa ahụ mgbe ị na-asacha jaketị gị.
Bọọlụ ahụ na-agbadata ala wee wepụ ụfụfụ niile. I nwekwara ike tinye bọọlụ tenis abụọ ma ọ bụ atọ na draya ya na ohiri isi, duvets na ihe ndị ọzọ. Ha na - enyere ịsa akwa gị aka ọsọsọ ma nọrọ jụụ ma maa mma Ọfụma na ị ga - eji bọọlụ tennis dị ọcha! I nwekwara ike kechie ha na sọks ochie ka ụcha ahịhịa ndụ anaghị arapara na uwe gị.- Tinye iko abụọ nke kọfị siri ike ma ọ bụ tinye tii ma ọ bụrụ na ị na-asa uwe ojii.
Ihe ọ drinksụ drinksụ ndị a na-eme dị ka ihe na-agba agba agba nke na-agbapụta ma na-ewusi agba mbụ nke ihe ndị ahụ. - Top ụfọdụ ice cubes na draya na ị ga-ewepụ creases na uwe gị. Ejila ọtụtụ n'otu oge ahụ Ejila ice cubes ma jupụta akwa gị na ọnụ ya na ọtụtụ uwe - Jiri bọọlụ foil aluminium iji lụso nrụpụta static na draya.
Bọọlụ aluminom nwere ike ijere gị ozi ihe dị ka ọkara afọ tupu ị gbanwee nke ọhụrụ - ihe ndina gị na uwe gị ga-adịkwu nro ma ọ bụrụ na itinye ọtụtụ ajị anụ na-anọpụ iche na draya - ọbụlagodi na ị ga-asacha ibu gị na-acha ọcha ya na sock na-acha uhie uhie (ma ka anyị kweta na ihe ndị a bụ ọbụna ndị kasị mma n'ime anyị), ị ka nwere nhọrọ ịchekwa uwe gị. Gwakọta ihe ngwọta nke mmiri ọkụ na soda na ọkara otu iko ncha akwa na ọkara otu iko nnu ma gbanye uwe gị gbajiri na ngwọta a tupu etinye ha na draya. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ị ga-eweghachi ihe gị dị ka ọcha n'oge gara aga.- Cornstarch na-abata n'aka mgbe ị ga-emerịrị mmanụ griiz.
Tinye ya ozugbo na ebe ruru unyi ma hapụ ya ebe ahụ maka nkeji ole na ole. Mgbe ahụ tinye akwa dị ọcha, dị mkpa na nsị griiz ma tinye ya na nnukwu ọkụ - mmanụ ga-etinye ya na ọka - ị nwekwara ike iji nzu iji wepụ abụba nsị. Ghichaa nzu n’ime ebe ruru unyi wee saa uwe ahụ dịka ị ga-adị. - Iji mee ka mmanụ griiz na-apụ n'anya, ịnwekwara ike iji ncha efere na ebe ruru unyi wee tee ruo mgbe ihe niile na-ejupụta.
Mgbe ahụ tụfuo ihe ahụ n'ime igwe ịsa ahụ.- anotherzọ ọzọ ị ga-esi kpochapụ mmanụ griiz bụ ihe na-esi ísì ụtọ (atụghị anya ya, nri?)?). Naanị fesaa ya na ntụpọ ọhụrụ nke griiz, wee hichapụ ya ruo mgbe akara niile nke nri Pizza gị ga-apụ n'anya! Wha ya nkeji! Pizza? i kpọghikwa m? - Have nwetụla mgbe ị nọ na-eche ebe sọks ndị ahụ furu efu gara? Amaghị m ma
Ma amaara m ezigbo ụzọ iji gbochie ha ịla n'iyi! Tinye sọks onye òtù ezinụlọ nke ọ bụla na uwe nke aka ha Akpa ndị a ga-emecha gafee akwa na draịva na-enweghị otu sọks! - Uwe elu na-anakọta mmanụ gị niile na olu akwa. Ma nke ahụ abụghị nsogbu ọ bụrụhaala na ị chetara na ncha ntutu bụ naanị ihe iji wepu mgbanaka gburugburu olu akwa.- Iji gbochie agba nke uwe ọhụrụ gị ịpụ n'anya, tinye ọkara iko nnu tupu ịsaa - Mgbe ị na-asa akwa nhicha gị, wụsa ụfọdụ mmanya n'ime akwa akwa akwa akwa akwa akwa - Akara aka nke aspirin, tinyere ọtụtụ ọcha, ga-enwu uwe ma wepu ntụpọ edo edo na isi ọwụwa ọ kpatara gị - Ọkara iko mmanya vaịn na-echebe denim ọchịchịrị ka ọ ghara ịda.- Iji gbochie ebu na ebu ibido na igwe igwe gi, tinye okara iko ora, nke bu nnu nnu nwere ezigbo alkaline, tinyere ibu akwa gi.
Borax dịkwa irè maka iwepụ ntụpọ siri ike na ahịhịa, kọfị, na ihe nrịbama. Sook a unyi uwe na ihe ngwọta nke otu iko mmiri ọkụ na ọkara otu iko borax. Hapụ ya otu awa wee sachaa ya.
You chọrọ ịma ihe kachasị mma banyere usoro a? Ọ dị mma ọbụlagodi akwa kachasị mma! - Iji wepu anụ na-esi ísì ụtọ na uwe gị, gwakọta otu iko ncha akwa na ọkara iko mmanya ma sachaa dị ka ị na - eme - Ọ bụrụ na jeans gị na - ete uwe ndị ọzọ na igwe ịsa ahụ, ha ga - eji nke nta nke nta tufuo agba ha. Iji belata mmetụta a na-adịghị mma, gbanye jeans gị n'ime tupu ị tinye ihe na-asacha akwa.- Ọ bụrụ na uwe na-esi na igwe ịsa ahụ nwere ntụpọ, etinyela ya na draya.
Ma ọ bụghị ya, okpomọkụ ahụ ga-eme ka ntụpọ ahụ setịpụrụ ma ọ ga-esi ike karịa iwepu ya.- Ma onye na-edozi aka na ntutu isi bụ ihe mgbaze dị ike nke nwere ike inyere gị aka i wepụ ntụpọ na uwe gị! Ghaa ntụpọ na otu n'ime ngwaahịa ndị a, hapụ ya maka ihe dịka 10 nkeji wee saa ya dị ka ọ dị na mbụ.- Bee lemon ma ọ bụ abụọ na mpekere ma tụgharịa iberibe ahụ na mmiri mmiri.
Weta mmiri ahụ na obụpde, gbanyụọ ọkụ ahụ, ma tinye uwe ọcha gị adịla nkọ n’ite ahụ. Hapụ ya ka ọ gbọọ ruo otu awa, wee saa ya otu ị ga-adị. Otú ọ dị, ị kwesịrị ijide n'aka na akwa ahụ nwere ike iguzogide okpomọkụ. - Ọ bụrụ na jeans gị nwere ahịhịa ahịhịa, gwakọta ngaji abụọ nke hydrogen peroxide na 1 ngaji nke ncha efere.
Tinye ngwakọta a na nsị ahihia, hapụ ya, wee saa jeans gị ka ị ga-eme. - Iji wepu uwe na-acha odo odo na uwe gị, kpoo ebe ahụ emetụtara ya na nnu nke tebụl na mmiri ọkụ, wee saa ahụ. - usual nwekwara ike wunye ihe ngwọta nke akụkụ mmiri hà nhata na hydrogen peroxide na ọsụsọ stains ma hapụ ya ka ọ bụrụ ọkara otu awa tupu ịsachaa, mana B use eji usoro a na akwa agba! - Ichapu mmanya mmanya na-acha ọcha na ectly n'ime akpa ahụ tupu ịsaa bụ ụzọ ọzọ dị irè iji mee ka uwe gị ghara inwe ntụpọ ọzọ.
Na nke ahụ mechiri akụkụ a nke uwe
Kedu maka gị? You maara usoro ịsa ahụ ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịkekọrịta? Mgbe ahụ, gwa m ihe ndị a kwuru! Ọ bụrụ na ị mụta ihe ọhụrụ taa, dịka edemede a ma soro enyi gị kerịta ya. Ma - hey! - Etinyekwala bọọlụ ahụ naanị! Anyị nwere ihe karịrị 2,000 isiokwu ị na-ekiri, ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ aka ekpe ma ọ bụ aka nri, pịa ya ma nwee ọ !ụ! Nọgide Na-egbuke egbuke n'akụkụ Ndụ!
You na-asa akwa apịtị na mmiri ọkụ ma ọ bụ mmiri oyi?
Ọ bụrụ naapịtịakpọnwụọ ma ọ bụ hichapụ ihe ọ bụla akpọrọ akpọ, wee banyemmiri oyi. Ejila mgbemmiri ọkụ na-bidonhichausoro n'ihi na ọ na-esi nri protein n'ime etiti n'ime eriri ndị na-eme ka nsị ahụ sie ikekawepụDec. 15 2020
Ime apịtị na-emebi igwe igwe?
Adịghị eme ihe m mere mgbe mbụ m agbụrụ na-etinye apịtị uwe ogologo n'imeigwe ncha.Na-asachaUwe apịtịgamechie gịigwena ọzọ gị ibu nkena-asa ákwà gaputa na adighi nma kari ka o siri banye.Ọkt 9 2014
Ndewo, isiokwu taa ga-adịtụ obere maka na m ga-akpọbata gị na kichin m ma ọ bụghị maka isi nri, kama maka ịsa ihe. N'ihi ya, m mere nyocha maka otu n'ime isiokwu m ma chọpụta nyiwe nke na-ekwu na ị ga-asa mmanya gị na mmanya kama na-edozi na echere m na nke ahụ dị ka ihe m ga-anwale, yabụ ka anyị mee nke ahụ ọzọ taa. Ka ịghara ịna-ele mmadụ anya n'ihu, m ga-eji mmanya gbara ụka, ọ bụghị ihe nchacha.
Naanị n'ihi na achọrọ m ịhụ ka mmanya si arụ ọrụ, anyị agaghị ekpe ikpe ma ọ dị ọcha ma ọ bụrụ na ọ dị nro. Ọ dị mma, ana m agba ọsụsọ dị ka ézì n’ihi na ọ dị ọkụ. Taa abụghị ụbọchị dị mma ịme edemede.
Naanị na mmiri kpuchiri m. Ndo ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ ya. N'ihe banyere ịdị nro, na sweta abụghị nke dị nro na agbanyeghị ya mere enweghị m atụmanya dị elu maka ya n'oge ahụ.
Ana m agagharị na iko 1/4 Jiri mmanya m ga-asacha ya maka okirikiri nke oge nkeji iri abụọ na atụ anya okpu ga-ezuru, gafee mkpịsị aka gị, ọ gaghị emebi ya n'ihi na mgbe ọ lara, m jọgburu onwe ya n'ihi na ọ bụ otu nke ọkacha mmasị m sweaters. Ihe ndị ị na-eme maka YouTube. Ma enwere mmanya.
Gaghị ahụ ya n’ezie n’ihi na o doro anya na ọ bụ uzo, mana ọ dị ebe ahụ. Anaghị m agha ụgha. Ọ dị mma, ka anyị tinye nke a na igwe ịsa ahụ na nke ahụ bụ drawer na-ehicha nke m gbalịsiri ike ihicha maka unu anaghị arụ ezigbo ọrụ.
Ngwa, ka anyi jee. Aga m edebe ya You zigara nsonaazụ ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ naanị onye uwe ojii, ọ bụ naanị uwe mwụda, ọ bụ uwe mwụda m ka anyị gaa n’ihu, ka anyị meghee sesame ebe ị nọ.
OH! Ọ na-eme, chi m, ejighi m n'aka, enwere m mmetụta dị nro, oo chim, ma o mebighi emebi, nke ahụ bụ eziokwu. Agba ahụ ka dị mma, ọ na-adị nro m na-eche maka sweta nke na-adịtụghị nro, echere m na nke ahụ dị mma, m ga-akpọ nkụ m ga-ehicha ya ma anyị ga-ele ya anya n'ụzọ ziri ezi, yabụ ọ bụ ọkara -dry na m ga-ekwu na m na-eju anya banyere ya. Ọ gafeela.
Mara ezigbo mma, Agaghị m etinye ya na ihu m n'ihi na enwere m ntọala na nke ahụ ga-emebi ya, mana ee, gaa tinye uwe gị niile n'ime mmanya n'ihi na ọ na-eme ka ha dị nro ma dịkwa mma
Kedu otu esi ehicha akwa apịtị n’ime igwe eji asa ihe?
Dị ọchaiheuwen'imeigwe nchana mmiri ọkụ ma ọ bụ mmiri ọkụ. Jiri kachasi mmiri ntọala akwadoro makaapịtịisiokwu (s) nkeuwe. EtinyekwalaUwe apịtịna ihe ndị ọzọ dị naigwe ncha, dị ka nke a nwere ike ime ka apịtị zigara ihe ndị ọzọ.
Ndi mbat ẹsu ke nsinsi?
Mbaknaunyibụ ndị iro a na-apụghị izere ezere nke ịsa akwa. Ha nwere ike iyi ihe dị mfe ijikwa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị edozi ya n'ụzọ ziri ezi, ha nwere ike ibute ihe na-adịghị mma nana-adịgide adịgide. Site n'ịgbaso usoro ole na ole dị mfe, ị ga-enwe ike ịme ọbụlagodi egwu kachasị egwuunyi apịtịna mfe.June 24. 2016 Nọvemba
Ogologo oge ole ka ịsacha akwa mmiri?
Obi dị m ụtọ, ọ bụrụ na ị nọ na-echeogologo oge ka ịhapụ akwa mmirin'imewashermaka, azịza ya dị mfe. Ke ofụri ofụri, i nwere ikepụọnke giakwa mmiriọ dịkarịa ala awa asatọ na iri na abụọ, dị ka ọkachamara si thelọ Ọrụ Whirlpool nke Fabric Science si kwuo.Mar 6 2020
Ndi apịtị aputa na asacha?
Na-asachammiriapịtịga-eme ka unyi ahụ ka njọ! Ikwanye ma ọ bụ hichapụ ihe ọ bụla akpọnwụapịtịnke ahụ ga-biaomume rụrụ Abù hichaa ebe nwere ntụpọ na mmiri mmirina-asa akwaNtucha dị ka Persil Non Bio Liquid, na-agbaso usoro n'isiokwu a.Jul 19 2018 Nov.
Uwe ha na-ehicha ihe na mmiri ọkụ?
Were akwa: Knit na akwa sịntetik (dịka spandex, naịlọn, polyester, na rayon blends) dị mfe ịsachammiri ọkụ. Ọ bụrụ na idebe ihe ọcha bụ ihe mgbaru ọsọ — ma ọ bụ gị na onye ezinụlọ gị na-arịa ọrịa — na-asachasị yauwena ihi ụrammiri ọkụnwere ike inye aka ịkwụsị mgbasa nke nje.
ezumike igwe kwụ otu ebe
Kedu ihe kpatara egbe ji ekike m mgbe m sachara?
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụta ọ na-eme n'ihi asludedMee na igwe, nke a makwaara dika 'scrud'. Nasludedbụ waxy wuo-elu nke na-eme mgbe akwa nro na-abịa na kọntaktị nasaaomo. Mgbe ịsaaakwa nhicha nke oge a na igwe gị, cheta ka ị ghara iji akwa dị nro.
Gịnị bụ agba aja aja na igwe ịsa m?
Kedu ihe bụ Scrud? Scrud bụ aha enyere waxy wuo nke nwere ike ime na nke ọ bụlawashermgbe akwa akwa ahụ na-abata na ihe nchacha. Ọ bụrụ na ekwe ka Scrud wuo naigweọ nwere ike ibute nsị na uwe na isi na-adịghị mma nawasher.Ọnwa Ise 29, 2019
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị nwere apịtị na uwe gị?
Ọ bụrụ na ị nwere apịtị na uwe naanị-akọrọ, kpọga ha na onye na-ehicha ihe, ma ọ bụ jiri ihe nhicha ụlọ na-agbaso ntuziaka nke ndị nrụpụta. Ọ bụrụ na ntụpọ apịtị dị na uwe akpụkpọ anụ, ịsacha abụghị nhọrọ. Kama, jiri nwayọ hichaa apịtị dị ka o kwere mee na akwa mmiri, ma ọ bụrụ na apịtị ahụ ka dịkwa mmiri.
Kedụ ka ị ga - esi nweta akpụkpọ apịtị site na akpụkpọ anụ?
Ọ bụrụ na ntụpọ apịtị dị na uwe akpụkpọ anụ, ịsacha abụghị nhọrọ. Kama, jiri nwayọ hichaa apịtị dị ka o kwere mee na akwa mmiri, ma ọ bụrụ na apịtị ahụ ka dịkwa mmiri. Mgbe ahụ, jiri akpụkpọ anụ kpoo akpụkpọ ahụ.
Kedu otu esi tufuo ahihia apịtị isi ike?
Jiri mmịpụ wepụ maka apịtị apịtị isi ike. Chọọ maka onye na-ehichapụ unyi nke eji mee ihe na apịtị na unyi na nnukwu ụlọ ahịa mpaghara gị ma ọ bụ na ntanetị. Tinye ntanye ntụpọ ozugbo na apịtị jiri mkpịsị aka dị ọcha ma ọ bụ akwa mmiri dị mmiri wee hapụ ya ka ọ nọdụ maka minit 5-10.